HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်အစ္စတန်ဘူလ်တွင်ကျင်းပခံရဖို့ Marmara မြို့ပြဖိုရမ် 01-03 2019 အောက်တိုဘာလ,
20 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, လှုပ်ရှားမှုများ, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
အဆိုပါ 01-03 အတွက်အောက်တိုဘာလ 2019 ပိုပြီးရှိရာမြို့သင်တန်းသားများထက်ပို 25 နှင့်အတူရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကနေရွှေ့ပြောင်း၏မြို့တော်ဝန်ထက်စပီကာကိုကျော်အစ္စတန်ဘူလ် Marmara အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြို့ပြဖိုရမ် (Marmara မြို့ပြဖိုရမ်-MARUF) 200 တိုင်းပြည် 100 အတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့နှင့် 3000 အကြားကျင်းပလိမ့်မည် နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုမြို့ပြလူထုအာကာသနှင့်ပတ်သက်သောအများအပြားဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအပေါ်ဆွေးနွေးဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ ထိုကမ္ဘာမှအုပ်ချုပ်ရေးမှုးနှင့်တူရကီအနေဖြင့် NGO အဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်များ, ပညာရှင်များနည်းပညာအဖွဲ့အစည်းများမွို့၌ရှိသမျှသောသက်ဆိုင်သူများတူညီတဲ့ platform ပေါ်တွင်အတူတူလာမယ့်နေကြသည်။ နေ့ကို, တစ်ပြိုင်တည်းအစည်းအဝေးများ, အင်တာဗျူး, စားပွဲဝိုင်း, အလုပ်ရုံ, ဖျော်ဖြေပွဲ, ပြပွဲ, ပြိုင်ပွဲနှင့်နည်းပညာလာရောက်လည်ပတ်သူတစ်လျှောက်လုံးဖိုရမ်ပြား၏3အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖွဲ့စည်းပါလိမ့်မည်။
Marmara အဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေမှုများရှိဆဲအစည်းအရုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့အခြေစိုက်ဖိုရမ်များကိုရည်ရွယ်သည်ဖြစ်လိမ့်မည်တူရကီနှင့်အတူမြို့ပြဒေသများရှိနိုင်ငံတကာအဆင့်အထိ Marmara မြို့ပြဖိုရမ် (MARUF) မှာနှစ်နှစ်စည်းရုံးလိမ့်မယ်။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်၎င်းကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ၌ကျင်းပလိမ့်မည်သည့်အစ္စတန်ဘူလ် MARUF မှာ 1-3 အောက်တိုဘာလ 2019 များအတွက်မြို့ကြီးများ, အသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ဒီဇိုင်းအားလုံးသက်ဆိုင်သူများအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍနှင့်မြို့ပြဝန်ဆောင်မှုများနှင့်မြို့ပြစီမံခန့်ခွဲမှုအတူတကွကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်မှုအကဲဖြတ်ကြလိမ့်မည်အတူတကွဆောင်ခဲ့ဦးမည်။ တိုင်းနှစ်နှစ်, အဖိုရမ်နိုင်ငံတကာအဆင့်မှာကျင်းပပါလိမ့်မည်, အသိပညာ, အတွေ့အကြုံနှင့်အဆောက်အဦထက်ပိုအတူစပီကာများနှင့်သင်တန်းသားများကိုကျော် 25 200 3000 ကနေနိုင်ငံပေါင်းကြမ်းပြင်ဝေမျှဖို့ဖန်တီးလိမ့်မည်။
ဆောင်ပုဒ် MARUF နှင့်အတူဖွဲ့စည်းသည် "ဆုံးဖြတ်ချက်ထုတ်လုပ်သောမြို့ကြီးများ" နဲ့အညီစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရည်မှန်းချက်များ; မြို့ပြဿနာများအပြင်, ကွဲပြားခြားနားသောအသံများနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကို၏အရေးပါမှုကိုဆှေးနှေးဖို့အတူတူလာကြလိမ့်မည်နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပလက်ဖောင်းဖြစ်နှင့်ဒေသခံသတင်းအချက်အလက်မျှဝေရေးများအတွက်မြေပြင်ကိုပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ်။ ဖိုရမ်; ထိုမွို့၌တစ်ဦးချင်းစီနှင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ၏ဘဝအသက်တာ၌မြို့ပြ၏လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ဒေသခံဒေသဆိုင်ရာ, အမျိုးသားရေးနှင့်နိုင်ငံတကာအဆင့်အထိဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့ဖန်တီးစီးပွားရေး, နိုင်ငံရေး, လူမှုရေး, ဂေဟစနစ်အပြောင်းအလဲများနှင့်ပြဿနာများကိုစည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ဆန်းစစ်ဖို့ရည်ရွယ်သည်။
MARUF, ပထမနှစ်တွင်တစ်ကျယ်ပြန့်ရှုထောင့် 12 ဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူမြို့ကြီးများကမ္ဘာ၏အသေးစိတ်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ပေးသွားမှာပါ: သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း, မြို့ပြနည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု, ပို့ဆောင်ရေးနှင့် Mobility ကို, မြို့ပြအခြေခံအဆောက်အအုံ, အိမ်ရာနှင့်တည်ဆောက်ပတ်ဝန်းကျင်, ရွှေ့ပြောင်းခြင်း, မြို့ပြကွန်ယက်သည်ပြည်တွင်းဖွံ့ဖြိုးရေးလူမှု Inclusion , ခံနိုငျရညျ, အများပြည်သူအာကာသ, အုပ်ချုပ်ရေး။
MARUF ဒေသခံအစိုးရများအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်အကျပ်အတည်းနှင့်လူ့ mobility status ကိုနှင့်မြို့၏အခန်းကဏ္ဍကိုခိုင်မာစေရန်, မြို့ပြအကြောင်း, လုံခြုံအားလုံးပါဝင်နိုင်, ကြံ့ခိုင်ခြင်းနှင့်ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအသိအမြင်ပိုမို livable နှင့်သာတူညီမျှမြို့ကမ္ဘာ၏ဖွဲ့စည်းခြင်း, မြို့ကြီးများမှအထောက်အကူများနှင့်မြို့-ဒေသများအကြားအချက်အလက်များ၏စီးဆင်းမှုကိုသေချာစေရန် ထိုသို့ထိုကဲ့သို့သောမြို့ကြီးများအကြားကွန်ယက်ကိုဆက်ဆံရေး supporting အဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အတူထွက်သတ်မှတ်။
အထွေထွေအီးယူသမ္မတ, IFCA, UNDP မှတူရကီ, ဆှီဒငျ Institute မှ, WRI တူရကီရေရှည်တည်တံ့သောမြို့ကြီးများ, ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေး၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသင်း (UITP) ၏နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန, ထိုကဲ့သို့သောအဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေမှုများရှိဆဲများ၏အစည်းအရုံးအဖြစ်တူရကီအဖွဲ့အစည်းများအဖြစ် Marmara ဒေသအများအပြားမြူနီစီပယ်, ဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီများနှင့်တက္ကသိုလ်တည်ရာအရပ်တွင်တည်ရှိသည် ဖိုရမ်ရဲ့အမှုဆောင်များနှင့်အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့တူရကီထံမှလက်ခံရရှိနှင့်ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးထံမှအများအပြားအမည်များကိုအတူတူလာကြပြီ။ TRT နဲ့ TRT ဖိုရမ်ရဲ့မီဒီယာမိတ်ဖက်ကမ္ဘာ့ဖလားပါသည်။
ပါဝင်မှုအခမဲ့ဖြစ်သည့်အတွက်ဖိုရမ်တစ်ခုအဘို့အပြည့်စုံသတင်းအချက်အလက်နှင့်မှတ်ပုံတင်များအတွက် www.marmaraurbanforum.org သင်ကလိပ်စာသွားရောက်နိုင်ပါသည်။
Sabiha Gokcen လေဆိပ်က Metro အောက်တိုဘာလ 29 2019 အတွက်ဖွင့်လှစ်! 11 / 12 / 2018 ယင်း AK ပါတီ၏အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းသေးသုံးကာလသို့ထည့်သွင်းထားသောစည်ပင်သာယာခရိုင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေထဲမှာထုတ်ဖော်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ, တစ်ချိန်တည်းမှာအစဉ်အလာကိုဆက်လက်အမည်များနှင့်အတူအောင်မြင်သောစီမံကိန်းများနှင့်အတူဆက်လက်လူများတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌နေရာရှိသည်။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. မကြာခဏ 105ကျန်ရှိနှစ်ပေါင်းလာမည့်နှစ်တွင်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြသည်ပြီးနောက်ရရှိခဲ့အတွေ့အကြုံ၏အလင်း၌အစ္စတန်ဘူလ် Pendik မြို့တော်ဝန်ကာဣနန် Sahin "ဟုသမ္မတဦးသိန်းစိန်အမေး" အစီအစဉ်တွင်မိမိတို့၏အောင်မြင်မှုအကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်။ Sahin လည်းကောင်းသောသတင်းပေးခဲ့တယ်! Sabiha Gokcen မြေအောက်ရထား၏အဖွင့်များ၏ရက်စွဲကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အမျှဝေများအတွက်အစ္စတန်ဘူလ်တွင်နေထိုင်သူများစိတ်အားထက်သန်စွာကျနော်တို့ Pendik အတွက်အရှိန်မြှသည့်မက်ထရိုဖို့ " ... (Tavşantepe-Sabiha Gokcen မြေအောက်ရထား) ကသမ္မတ Sahin စောင့်ဆိုင်း။ အလွန်အလုပ်များသုံးဘူတာနှင့်အတူKadıköy-Pendik လိုင်းအတွက် Pendik-Tavşantepe-Yeşilbağlarဘူတာရုံအမျှ ...
ဇူလိုင်လ 3-5 အတွက်အစ္စတန်ဘူလ်တွင်ကျင်းပခံရဖို့သိုးထီးသင်တန်းအစီအစဉ် 28 / 06 / 2019 မြို့ပြရထားလမ်းစနစ်များ, အသုံးဝင်မှု, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အားမပျက်စီးခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး (ထီးခေတ္တ) လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွင်ယုံကြည်စိတ်ချရမှု, ဇူလိုင်လ35-date ဖြစ်အောင် (UITP) တွင် Marmara ၏အဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေမှုများရှိဆဲ၏အသင်းပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေး၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Association က Hosted နေဖြင့်အစ္စတန်ဘူလ်တွင်ကျင်းပလိမ့်မည်။ ပညာရေး, system ကိုယုံကြည်စိတ်ချရ, ဒေတာစီမံခန့်ခွဲမှု, ဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့်သိုးထီးစာရင်းဇယားများ၏နယ်ပယ်, အန္တရာယ်လက်ခံမှုစံ၏အတိုင်းအတာအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်လုံခြုံရေးအစီအစဉ်များကိုဖုံးအုပ်ထိုကဲ့သို့သောအမှားသစ်ပင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကဲ့သို့သောယုံကြည်စိတ်ချရပိတ်ပင်တားဆီးမှုကားချပ်အဖြစ်ခန့်မှန်းသိုးထီး parameters တွေကိုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရအဖြစ်ကိစ္စများ, ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအကဲဖြတ်နှင့်အတူလျှောက်လွှာ, သစ်ကို process ကို စီမံခန့်ခွဲမှု tools တွေကိုအကြောင်းအရာများ၏ထိရောက်မှုအရှိဆုံးအသုံးပြုမှုကိုဆွေးနွေးတင်ပြပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်အတွက်လည်းအလားအလာဝန်ဆောင်မှု၏အရည်အသွေးထိခိုက်, နိုင်ငံတကာဥပမာအတူသိုးထီးလိုအပ်ချက်များကိုဆနျးစစျ ...
အရှည်အားအစ္စတန်ဘူလ် 2019 430 ကီလိုမီတာတစ်ဦးရထားလမ်းစနစ်ကရှိပါလိမ့်မယ် 31 / 01 / 2015 အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ: အရှည်အစ္စတန်ဘူလ် 2019 430 ကီလိုမီတာတစ်ဦးရထားလမ်းစနစ်ကရှိပါလိမ့်မယ် Kadir Topbas "ကျနော်တို့ 2019 430 တယ်ဘယ်အချိန်မှာကျနော်တို့လမ်းကြောင်းအရှည်မိုင်ရှိလိမ့်မယ်" ဟုသူကပြောသည်။ Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာမှာအလုပ်လုပ်စတင် Kadir Topbas "ကျနော်တို့ 2019 430 တယ်ဘယ်အချိန်မှာကျနော်တို့လမ်းကြောင်းအရှည်မိုင်ရှိလိမ့်မယ်" ဟုသူကပြောသည်။ 11 68 BILLION YEARS ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM), မက်ထရိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံတစ်ခုထက်ပိုထပ်ပြောသည်။ ယင်းမက်ထရိုMecidiyeköy-Mahmutbey Mahmutbey ကျောက်စာ၏ပထမအဆင့်တွင်မြေအောက်ရထားလိုင်းကို၏ဆောက်လုပ်ရေးစတင်လိုက်ပါပြီ။ ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနာရီ 70 တထောင်နိုင်ငံသားများအားဝတျပွုမညျဖွစျကွောငျးအရေးပါသောMecidiyeköy-Mahmutbey မက်ထရိုလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ Metro န်ဆောင်မှု ...
Sabiha Gokcen လေဆိပ်က Metro အောက်တိုဘာလ 29 2019 အတွက်ဖွင့်လှစ်!
ဇူလိုင်လ 3-5 အတွက်အစ္စတန်ဘူလ်တွင်ကျင်းပခံရဖို့သိုးထီးသင်တန်းအစီအစဉ်
အရှည်အားအစ္စတန်ဘူလ် 2019 430 ကီလိုမီတာတစ်ဦးရထားလမ်းစနစ်ကရှိပါလိမ့်မယ်
Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro 2019 အသင့်ဖြစ်ပြီလား
Bursa 2019 ဖို့ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်၏ traffic ပြဿနာများ
Sivas အတွက်စတင်ခြင်း, တူရကီ YHT လေ့လာရေးခရီး 2019 သင့်တယ်